Haufanire kubvunza munhu wese, izvi zvingave zvinoda vashandi-zvakanyanya uye zvinodhura zvakanyanya. Makambani ekutsvagisa musika anoshanda kuti awane yakanyanya kuvimba, mwero wakaderera wekukanganisa uchisvika padiki pahuwandu hwevanogashira hunodiwa. Izvi zvinozivikanwa seyako saizi yekuenzanisira. Uri sampling imwe muzana yehuwandu hwevanhu kuti vawane mhedzisiro inopa danho re chivimbo kusimbisa mhedzisiro. Uchishandisa fomula inogamuchirwa zvakanyanya, unogona kuona ichokwadi saizi yekuenzanisira izvo zvinomiririra huwandu hwevanhu hwakazara.
Kana iwe uri kuverenga izvi kuburikidza neRSS kana email, tinya nepano kune saiti kuti ushandise chishandiso: